‘राजनीतिक परिवारबाट आएकाहरू सौन्दर्य प्रतियोगितामा भाग लिन आउनु राम्रो’ : मिस नेपाल शृङ्खला – Etajakhabar
‘राजनीतिक परिवारबाट आएकाहरू सौन्दर्य प्रतियोगितामा भाग लिन आउनु राम्रो’ : मिस नेपाल शृङ्खला
मिस नेपाल– २०१८ मा हेटौँडाकी शृङ्खला खतिवडा, २२, ले अन्य २४ प्रतिद्वन्द्वीलाई उछिन्दै मिस नेपाल वल्र्डको ताज पहिरिन् । यसका अतिरिक्त ‘मिस ब्युटिफुल हेयर’ र ‘फेस अफ फेसिनो’को उपाधि पनि उनकै पोल्टामा परे । थापाथली इन्जिनियरिङ क्याम्पसबाट आर्किटेक्चरमा स्नातक खतिवडाले आउँदो डिसेम्बरमा चीनमा हुने मिस वल्र्डमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नेछिन् । मिस नेपाल चुनिएको पर्सिपल्ट नेपालसँग कुराकानी गर्न उनी कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको कार्यालयमा तयार भइन् उनीसँग कुराकानी :
मिस नेपाल ताजको भार कस्तो हुँदो रहेछ ?
ताज त हल्का नै छ । तर, यससँगै आएका जिम्मेवारीचाहिँ भारी छन् । कुनै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देशको इज्जतका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नु सानो कुरो होइन । यसका लागि मैले प्रशस्तै मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तपाईंको उपाधिलाई बुबा (विरोध खतिवडा)को राजनीतिसँग जोडेर पनि हेरियो नि ?
सकारात्मक रूपमै हेर्छु । राजनीतिक परिवारबाट आएकाहरू यसरी सौन्दर्य प्रतियोगितामा भाग लिन आउनु राम्रो हो । पहिले पनि धेरै आउनुभएको छ । पहिले राजनीतिक स्तरबाटै यस्ता प्रतियोगिताको विरोध हुने गर्थे । अहिले त्यस्तो भएन ।
बुबा के भन्नुहुन्छ ?
‘आई एम प्राउड अफ यू’ भन्नुहुन्छ । मेरो जितले उहाँ निकै खुसी हुनुहुन्छ । मेरो उद्देश्य मिस नेपाल बन्नुभन्दा पनि समाजमा केही परिवर्तन ल्याउनु हो । आफूले कमाएको लोकप्रियताको सदुपयोग गरी अरूको हितका लागि काम गर्ने इच्छा छ मेरो । बुबा यसबारे अवगत हुनुहुन्छ । त्यसैले, अझ प्रगति गर्दै जान प्रेरणा दिइरहनुहुन्छ ।
नयाँ सरकारका सुरुआती कामलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
देश बल्ल प्रभावकारी ढंगले संघीयतातर्फ अघि बढ्ने क्रममा छ । विकासका थुप्रै आयोजना प्रस्तावित भएका छन् । उहाँहरूले अहिले आप् mनो क्षमता प्रमाणित गर्ने समय हो । सफल पनि हुनुहोला भन्ने लाग्छ । तर, मैले नबुझेको एउटा कुरा, नयाँ सरकार पुराना सरकारले प्रस्ताव गरेका राम्रा परियोजनामा पनि काम गरौँ भन्नेचाहिँ किन सोच्दैन ?
नेपालमा महिला किन पछि परेका होलान् ?
राजनीति तथा विकास निर्माणका कार्यमा पुरुषकै बाहुल्य छ । तिनमा महिलाको संख्या किन यति न्यून ? लैंगिक विभेद अहिलेचाहिँ पहिलेभन्दा निकै कम भएको हो । यसलाई अझै कम गर्दै लैजान महिला आफैँ पनि सचेत हुनुपर्छ ।
नेपालीचाहिँ किन पछि परेका ?
हामी आफू केही गर्नुभन्दा बढी अरूले किन गरेनन् भन्ने गुनासा धेरै गर्छौं । अधिकार खोज्छौँ । तर, जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने बेला पछि हट्छौँ । अब यस्तो तरिका बदल्न जरुरी छ ।
विदेश जानेबारे सोच्नुभएन ?
अहँ, सोचिनँ । मलाई नेपालमै केही गर्नु छ । मैले थुप्रै परियोजनाका अवधारणा पनि तयार गरेकी छु । बिस्तारै सबै पूरा गर्दै जानेछु ।
मिस वल्र्डको ब्युटी विद अ पर्पसमा के विषयमा काम गर्नुहुनेछ ?
भूकम्पले भत्किएका घर बनाउन सरकारले हरेक घरका लागि तीन लाख रुपियाँ छुट्याएको थियो । सबैले पहिलो किस्ता मात्र हात पारेका छन् । दोस्रो किस्ता पाउन घरको नक्सा बनेको हुनुपर्छ । सहरमा आर्किटेक्ट र इन्जिनियरको संख्या ठूलो छ । तर, कतिपय गाउँमा एक जना आर्किटेक्ट पनि छैनन् । म पेसाले आर्किटेक्ट हुँ । भूकम्पछि सिन्धुपाल्चोकमा २ सय २५ घरका लागि नक्सा बनाएको अनुभव छ मसँग । यस्तै कार्य अब भीमफेदीमा गर्ने लक्ष्य राखेकी छु ।
मिस नेपालमध्ये धेरैजसो त्यत्तिकै हराउँछन् नि ?
सबैले समाजका लागि आफूले सकेको गरिरहेका पनि छन् । सबै आफ्नै करियरलाई अघि बढाइरहेका छन् । सञ्चारमाध्यमले नयाँ मिस नेपाललाई बढी स्थान दिने हुँदा पुराना ओझेल परेका मात्र हुन् ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, बैशाख ०३, २०७५ समय: ८:४६:१३
चर्चित लोकगीत सालको पात बिवादमा, १ लाख दिँदा पनि किन खेलेनन् रेखा देखी प्रियंकाले, निर्देशक शिव बिकले खोले एकएक पोल (भिडियो)
नेपाल आइडल सिजन १ का सुरज थापाले दुखित हुँदै भने, ‘ अहिलेसम्म नेपाल आईडलमा भोट गर्दा लागेको ऋण तिर्दै छु’ (भिडियो)
विश्व आनन्दको कोठाको लागि सामान लिएर गए- शिशिर भण्डारी, १२ बर्ष किन थुनिए एउटै कोठामा ? (भिडियो सहित)
नेपाल आइडलबाट आउट हुँदा क्युट क्रिशल भन्छन आमा धेरै रुनु भयो, भविष्यमा संगीतसंगै चलचित्रमा पनि आउने छु (भिडियो)
नभएको कुरा लेख्नु पत्रकारको धर्म होईन भन्दै यसरी जङ्गिईन् नायिका आचल शर्मा , म गलत नै छैन भन्दै अरुलाई स्पष्टीकरण दिनु जरुरि छैन भन्दै मिडियामा (भिडियो)
ब्रेकअप पछी सलोन स्त्री विहिन,यसरी पोखे दुखेसो (भिडियो)
सबैलाई चकित पार्ने अवस्थामा फेरी मिडियामा धरधरी रुदै आईन रबिना (भिडियो)
साधारण किसान की छोरी जो “हाइस्कुल पढी यो झुपडीमा हुर्के १५ हजार प्रतिस्पर्धीलाई उछिन्दै एमबीबीएसमा नाम निकालिन यिनै प्रतिमाले” (भिडियो)
लैजाउ घुमाउन मलाई ठमेल बजार भन्ने गित बाट चर्चामा आएकी नायिका एलिशा राईलाई ठमेल घुमाउने यी ट्याक्सि ड्राइभरको ईच्छा (हेर्नुस भिडियो)